Lego Ideas NINJAGO Microgame ပြိုင်ပွဲတွင်နောက်ထပ်ဆုများထပ်ပေးသည်
06 / 10 / 2021 06 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 285 Views စာ0မှတ်ချက် 21152 The Pirate သင်္ဘောစွန့်စားမှု, 21155 အဆိုပါ Creeper မိုင်း, 21166 အဆိုပါစွန့်ပစ်မိုင်း, Mario St ။ နှင့်အတူ 71360 Adventuresartသင်တန်း, 71374 Nintendo ဖျော်ဖြေရေးစနစ်, ၇၁၇၄၁ Ninjago City ဥယျာဉ်, ပြိုင်ပွဲ, Ideas, ideas ပြိုင်ပွဲ, Lego, Lego Ideas, Lego Ideas ပြိုင်ပွဲ, Lego Ideas မိုက်ခရိုဂိမ်း, Lego Ideas Microgame ပြိုင်ပွဲ, Lego Microgame, Lego Minecraft, Lego Ninjago, Lego စူပါမာရီယို, Lego UNity, Lego စည်းလုံးညီညွတ်ရေး Microgame, မာရီယို, မိုက်ခရိုဂိမ်း, မိုက်ခရိုဂိမ်းများ, Minecraft, Ninjago, စူပါမာရီယို, စည်းလုံးညီညွတ်ရေး
အသစ်အတွက်ဆုများ Lego Unity Microgame ပြိုင်ပွဲအပါအ ၀ င်နောက်ထပ်အစုံများထည့်သွင်းရန်အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည် ၇၀၆၀၇ NINJAGO City ဥယျာဉ်.
မည်သူမဆိုယခုကဲ့သို့ဝင်ရောက်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ Lego Ideas Unity Microgame ပြိုင်ပွဲ ဂိမ်းနှစ်ခုကိုကစားရန်စဉ်းစားရန်အကြောင်းပြချက်ပိုရှိနိုင်သည် Ninjago ဆုများကိုအစုံထည့်ထားသည်။
အားလုံးမင်္ဂလာပါ! ကျွန်ုပ်တို့၏ @စည်းလုံးညီညွတ်မှု3dပြိုင်ပွဲအတွက်ဆုများကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် Ninjago အစုံ! မင်းရဲ့ကျယ်လောင်ပြတ်သားတဲ့အသံကိုငါတို့ကြားခဲ့တယ် Ninjago အစုံသည်ယခု p ဖြစ်သည်art ဆုထုပ်များ of
Update အကြောင်းဒီမှာဖတ်နိုင်ပါတယ်။ https://t.co/EPc3a9iKne #လီဂိုIdeas #နင်ဂျေဂို #စည်းလုံးညီညွတ်မှု pic.twitter.com/KZE4VwRuUF
- Lego® IDEAS (@LEGOIdeas) အောက်တိုဘာလ 6, 2021
Twitter တွင်ကြေငြာချက်အရသုံးစွဲသူများတောင်းဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်သည် Lego Ideas အဖွဲ့သည်ပုံစံများထည့်သွင်းရန်ပြိုင်ပွဲကိုပြင်ဆင်ခဲ့သည် Ninjagop အဖြစ်မီးမောင်းထိုးပြထားသောထုတ်ကုန်အပိုင်း၊art ဇာတ်ကောင်များနှင့်အခြားအရာများအပါအ ၀ င်အခမဲ့ပစ္စည်းထုပ်ပါရှိသည့်ပွဲစဉ်
ကြီးကျယ်သောဆုနှင့်အပြေးဆုရအထုပ်နှစ်ခုအတွက်တစ်ခု Ninjago ဖန်တီးမှုတစ်ခုစီကိုနှစ်ခုထက်ပိုသောအရာများနှင့်ပေါင်းထည့်ထားသည် ၇၀၆၀၇ NINJAGO City ဥယျာဉ် နှင့်ညီမျှသောသေးငယ်သည် 71720 မီးသတ်ကျောက်ခေတ် Mechမရ။ ပြိုင်ပွဲအမျိုးအစားတစ်ခုစီအတွက်ဆုသုံးမျိုးကိုပေးအပ်လိမ့်မည်။ Ninjago, မူရင်းနှင့် Behavior အုတ်များ
ခြေရာခံစောင့်ရှောက်သူများအတွက်ဤအရာသည်ယခုတွင်ကြီးကျယ်သောဆုများပါ ၀ င်သည် 71374 Nintendo ဖျော်ဖြေရေးစနစ်, ၇၀၆၀၇ NINJAGO City ဥယျာဉ်, Mario St ။ နှင့်အတူ 71360 Adventuresartသင်တန်း, 21166 အဆိုပါ "စွန့်ပစ်" သတ္တုတွင်းUnity Pro စာရင်းပေးသွင်းမှုတစ်နှစ်၊ Unity Store ခရက်ဒစ်တွင်ဒေါ်လာ ၂၀၀ နှင့်သင်၏ဂိမ်းတွင်ပါဝင်ခွင့်ရမည့်အခွင့်အလမ်း Lego စတိုး Arcade စက်များ.
တစ်ချိန်တည်းတွင် runner-up ဆုအစုံပါ ၀ င်သည် မာရီယိုနှင့်အတူ 71360 Adventures ကို, 21152 The Pirate သင်္ဘောစွန့်စားမှု, 21155 အဆိုပါ Creeper မိုင်း Unity Asset Store နှင့်အသစ်ထည့်သွင်းထားသောဒေါ်လာ ၁၀၀ ဘောက်ချာ 71720 မီးသတ်ကျောက်ခေတ် Mech.
ပလက်ဖောင်းတစ်နေရာတွင်အခြားပြိုင်ပွဲတစ်ခုကို ဦး တည်သည် ၂၁၃၂၉ Fender Stratocaster အခုမှစတာ အစစ်အမှန်တူရိယာနှင့်အစုံကိုယ်တိုင်အနိုင်ရရန်အခွင့်အလမ်းနှင့်
← Lego အသစ် Marvel ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် Wolverine minifigure
Lego တိုင်း Marvel တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ…? ဇာတ်လမ်းတွဲ ၁ တွင်ပြသထားသော set နှင့် minifigure →